जनजीवन सरल बनाउन बन्दाबन्दी खोलेको होः मन्त्री खतिवडा - Nepal Samaj
जनजीवन सरल बनाउन बन्दाबन्दी खोलेको होः मन्त्री खतिवडा
१५ साउन, २०७७नेपाल समाजमुख्य समाचार, राजनीति
काठमाडौं । अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम घटेको भनेर नभई जनजीवन सरल बनाउन बन्दाबन्दी खोलेको बताए । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सार्वजनिकीकरण गर्दै सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले नागरिक आफैँ सचेत भएन भने कोरोना सङ्क्रमण बढ्न सक्ने उल्लेख गरे ।
सरकारले चार महिना कडा बन्दाबन्दी गरेको र विस्तारै जनजीवन सहज बनाउन यसलाई खुकुलो बनाउँदै लगिएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । उनले भने, “कोरोनाको जोखिम कम गर्न सरकारसँगै नागरिकको भूमिका उत्तिक्कै भूमिका रहेको हुन्छ ।” जीवन रक्षासँगै बाँच्न पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गराउनु आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री खतिवडाले नागरिक जीवन सहज बनाउनेतर्फ सरकार लागि परेको बताए ।
हरेक नागरिकले सुरक्षित स्वास्थ्यका उपाय अपनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, “आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे नागरिक आफै सचेत हुनुपर्छ ।” कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम पूरै नहटेको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको भन्दै मन्त्री खतिवडाले सरकारसँगै नागरिक आफै सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले भौतिक दूरी कायम गरेर आफ्ना गतिविधि गर्न सबैलाई आग्रह गरे ।
आवागमन, हिँडडुल तथा सवारी साधनको परिचालन गर्दा हरेकले सचेतना अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, “कोरोनासित लड्दै हामीले जनजीवन सामान्य बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।” विश्वव्यापी अभ्यास अनुसार नेपाल सरकारले पनि सुरुआतमा बन्दाबन्दीमा कडाइ गरेको र त्यसपछि नागरिकलाई सचेत पार्दै बन्दाबन्दी खुकुलो गरेको उनले सुनाए।
नेपाल भारत सीमामा अहिले पनि बन्द नै राखिएको र कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था हेरी सरकारले निर्णय गर्ने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । सीमा नाका बन्द नै भए पनि कतिपय नागरिक लुकीछिपी आउने गरेको पाइएको उनले उल्लेख गरे । रातको समयमा तथा अन्य ठाउँबाट लुकेर आवतजावत गर्ने गरेकाले त्यसलाई निराकरण गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको मन्त्री खतिवडाले स्पष्ट पारे ।
क्वारेन्टिनका रुपमा नरहेका विद्यालय भवनलाई खाली गराउने प्रकृया सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खतिवडाले खाली भएका विद्यालयलाई तोकिएको मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहले निर्मलीकरण गरी अध्ययन अध्यापन योग्न बनाउन सरकारले निर्देशन दिएको उल्लेख गरे । उनले भने, “अब आयन्दा विद्यालय भवन परिसरलाई क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको रुपमा प्रयोग नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।” सरकारले शैक्षिक सत्र २०७७ र २०७८ को विद्यार्थी भर्ना भदौ १ देखि सुरु गर्ने र २०७६ र २०७७ को नतिजा प्रकाशन गर्न बाँकी भए तत्काल गर्ने, कक्षागत रुपमा विद्यार्थीको सङ्ख्या यकीन गर्ने, पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने र शिक्षकहरु अबिलम्ब विद्यालय पुगि सक्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार सरकारले विपद्मा मृत्यु भएको परिवारलाई रु. २ लाख राहत दिने निर्णय गरेको छ । एक जनाको मृत्यु भएमा रु. २ लाख तथा थप व्यक्तिको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति रु. १ लाखको दरले राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । मृतकको परिवारलाई उपलब्ध गराइने राहतमा एकद्वार नीति अवलम्बन गरिने उनले स्पष्ट पारे । अब राहत स्वतः स्थानीय तहबाटै परिचालित हुनेगरी जाने मन्त्री खतिवडाले बताए । त्यसको समन्वय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने उनको भनाइ थियो ।